व्यवसायी – Himalaya Television
पर्यटन क्षेत्र उठाउन अब राज्य र व्यवसायीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? (भिडियो कुराकानीसहित)
११ असोज २०७८ काठमाडौं । आज ४२ औँ विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोरोना कहरसँगै थलियो । थलिएको पर्यटन क्षेत्र उठाउन अब राज्य र व्यवसायीको भूमिका...
९ असोज २०७८ सुनसरी । जथाभावी पार्किङ गर्नाले सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्र कुरुप बनेको छ । दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । यसरी गरिने पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थापनमा मात्रै होइन आमनागरिक र व्यवसायीलाई समेत सास्ति हुने गरेको छ ।...
७ असोज २०७८ काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले वर्षाका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बुधबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गरी चाडपर्व नजिकिएसँगै चाडपर्व मनाउन उपत्यका बाहिर जाने यात्रुको सङ्ख्या...
पूर्वराजदूत एवम् व्यवसायी रुक्मशमशेर राणाको निधन
२६ भदौ २०७८ काठमाडौं । पूर्वराजदूत एवम् व्यवसायी रुक्मशमशेर राणाको निधन भएको छ । मिर्गौलासम्बन्धी समस्याबाट पीडित राणाको आज बिहान आफ्नै निवास काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा ८५ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । मिर्गौलाका बिरामी राणा लामो समयदेखि उपचारको क्रममा हुनुहुन्थ्यो...
व्यवसायीको पीडाः ‘कर बढेकोबढ्यै छ, अलिकति त सास फेर्ने ठाउँ दिनुस्’
१४ भदौ २०७८ बागलुङ । केही दिनअघि यहाँका युवा व्यवसायी सुवास श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेको ‘पोष्ट’ले धेरैको ध्यान खिचेको हुनुपर्छ । सर्रर हेर्दा सामान्यझैँ लागे पनि अन्त्यसम्म पढ्दा स्तब्ध पार्ने खालको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, “भोलिका दिनमा हामीजस्ता व्यवसायीको...
किन घट्यो जनै र क्वाँटीको व्यापार ? के भन्छन् व्यवसायी ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
५ भदौ २०७८ काठमाडौं । जनै पूर्णिमाका दिनमा लगाइने जनै र खाइने क्वाटीको व्यापार घटेको व्यापारीले बताएका छन् । जनैपूर्णिमाको अघिल्लो दिन आज बिहान काठमाडौंको असन बजारमा टोलाएर बसेका व्यापारीले जनै र क्वाटीको व्यापार गत वर्ष भन्दा धेरै कम...
२९ साउन २०७८ बनियानी । झापा बिर्तामोडका व्यवसायीले ब्याज र किस्ताका लागि ताकेता नगर्न यहाँका बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण व्यापार–व्यवसाय चौपट भएको भन्दै व्यवसायीले बैंकलाई ब्याज र किस्ताका लागि ताकेता नगरी लचकता अपनाउन आग्रह गरेका...
मजदुर एवं व्यवसायीका लागि पहिलो चरणमा पाँच हजार खोप माग
१३ साउन २०७८ गण्डकी । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले पर्यटनसम्बद्ध मजदुर एवं व्यवसायीका लागि तत्काल पाँच हजार मात्रा खोपको माग गरेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई नेतृत्वको टोलीले मङ्गलबार गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’लाई भेट गरी...